छवि चयन गर्नुहोस्: विवाह लागि bangs संग केश
"त्यहाँ एक केश हुनेछ: बित्तिकै भविष्यमा दुलही विवाह शैली देखि निर्धारित थियो, तुरुन्तै प्रश्न उठ्छ अन bangs विवाह समारोह र पर्याप्त सुन्दर?" छैन यो सिर्फ छवि bangs परी राजकुमारी, दुलही गणना जो हुनेछ? यस लेखमा हामी bangs सम्बन्धित सबै पक्ष कवर गर्न प्रयास गर्नेछ।
bangs नत्याग्ने कि?
सबै को पहिलो, प्रयोग गर्न नडराऊ। को fringe भने - यो आफ्नो दैनिक शैली एक तत्व, पनि विवाह छ त्यो तिमी सजाउनु हुनेछ। साँच्चै, यो सुशील भाग संग धेरै महिलाहरु धेरै सफलतापूर्वक आफ्नो उपस्थिति कमीकमजोरी सच्याउनुभयो। उदाहरणका लागि, धेरै लामो अनुहार वा छाला अदृश्य बनाउन सक्षम bangs blemishes। तिनीहरूले उनको अन्तर्गत यो लुकाउन सक्छ भने एक disproportionately उच्च वा धेरै कम निधारमा, conspicuous हुने छैन।
क्लासिकल शैली मा, नियम, एक सजिलै कंघी बाल, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जानेबेलामा को आवश्यकता प्रदान। तर अन्य अवस्थामा यो उपयुक्त bangs लामो प्रभाव छोटो "बाल्यकाल" छ "regrown कपाल।"
फैशन bangs संग केश विवाह लागि
चिल्लो बाक्लो bangs - आज फैशन को शिखर। साथै, विभिन्न बुनाई र जटिल braids पनि एकदम लोकप्रिय छन्। यी तत्व को संयोजन कसरी स्टाइलिश देखिन्छ हेर्नुहोस्। रोमान्टिक लागि Bohemian शैली यस्तो विवाह Hairstyles लागि सही। एक धमाका, र एक निश्चित लम्बाइ utjuzhkom वार्निश फोटोहरू यो तस्बिर को सौन्दर्य देखाउनुहुन्छ।
छोटो "स्कूल" को Headband वा र्याप, bangs को किसिमहरु को एक चमकदार बनावट संग संयुक्त चमकदार साटन रिबन सही फिट लागि धमाका।
को ब्रो गर्न Sloping कर्ल संग bangs र जारी एक सानो लापरवाह बीम फिर्ता मा दुलही गरेको tremulous र कोमल को शैली बनाउँछ। बेल, पंख र rhinestones धेरै मधुर स्वर छवि पूरक।
कहिलेकाहीं एक विवाह लागि bangs संग केश धेरै मूल, आफ्नो निधारमा अधिक किसिमहरु विभाजित भने, लाह साथ र तिनीहरूलाई बिछाउने कर्ल को मुख्य भाग जस्तो बनाउन सक्छ। यो स्पष्ट तस्वीर मा देखिन्छ। rhinestones र मोती को रंग को रूप मा गहने प्रभाव बृद्धि गर्न। यो दुलही irresistible हुनेछ।
यो शानदार कंघी नजिकै लम्बी fringe देखिन्छ। यो विकल्प लागि सजावट रूपमा सिद्ध diadem वा छ tiara। यो शैली भनिन्छ "राजकुमारी" उनको टाउको को पछाडि कपाल जुटाउने उच्च छ र उहाँलाई लागि सजिलै कंघी (तपाईं रोलर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ)।
संग विवाह केश लामो bangs उसको काँध भन्दा कर्ल बगिरहेको राम्रो हेर्न। तपाईं जरा मा बाल comb र तिनीहरूलाई टाउको वा मुकुट पछाडि "Malvina" को शैली राख्नु भने, यो जसको छवि अझ कोमल र स्त्री हुनेछ एक दुलही, पत्ता लगाउन गाह्रो हुनेछ। लामो bangs तपाईं छालहरू को रूप मा यो राख्न अनुमति दिन्छ - विवाह फेसनमा नयाँ प्रवृत्ति छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, एक विवाह लागि bangs एक केश - यो धेरै स्टाइलिश र आधुनिक छ। केही दुल्हन पनि आफ्नो निधारमा मा किसिमहरु combing र यो विवरण को reminiscent विभिन्न तत्व गठन, को bangs अनुकरण गर्न खोज्छन्।
JQuery सर्वसाधारण विन्डो - तपाईं स्थापना गर्न आवश्यक र कसरी के
मैनीक्योर स्पन्जले - एक साधारण डिजाइन मा असामान्य विचार!
सेन्ट बर्नार्ड - आल्प्स जन्म कुकुर